MILA VONJY MAIKA : Mitombo habe hatrany ny lohan’ilay zazavavy vao herintaona monja
Misedra olana mafy ny ray aman-drenin’ny zazavavikely iray atao hoe Rasamison Miary Fitiavana, ankehitriny. Mitombo hadiry na habe tsy an-kijanona ny lohan’ity zazavavy kely ity noho ny aretina atao hoe “hydrocéphalie”. 20 juillet 2017
Vao herintaona sy roa volana monja anefa ilay zaza no ampahorian’ny aretin-dratsy tahaka izao. Efa maro ny fitsaboana natao mba hahasalamana ity tsy manan-tsiny ity nefa dia mitarazoka hatrany izany ary vao mainka mihombo andro aman’alina ny aretina. Ny vola lanin’izy mivady koa anefa efa maro dia maro. Manao antso avo amin’ireo malala-tanana sy tsara sitra-po araka izany izy ireo, amin’izao fotoana izao, mba hanampiana ny hoenti-manana amin’ny fitsaboana ilay zaza.
Araka ny fanazavana voaray avy amin’ny ray aman-dreniny mantsy dia vao nanomboka efa-bolana ity zaza ity no narary ary efa natao ny fitsaboana rehetra saingy mbola tsy nahitam-bokany avokoa. Raha nanatona ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na HJRA izy ireo tamin’ity volana ity dia manodidina
ny 3 tapitrisa Ariary ny vola ilaina hiatrehana ny fandidiana ilay zaza.
Tsy manana izay vola izay anefa izy ireo hitsaboana ilay zaza, ka mangataka amin’izay afaka hanampy amin’ny hoenti-manana hanavotana ny menaky ny ainy. Afaka miantso ny laharana 034 25 150 45 na ny 033 73 530 99 avy hatrany ireo terem-panahy amin’izany. Misaotra sahady ireo efa nandray anjara ny ray aman-drenin’ilay zaza tsy salama.